Rio Ferdinand oo sheegay inuu gacan qaadi doono Terry iyo Cole kulanka: Chelsea vs Man Utd. - Caasimada Online
Home Warar Rio Ferdinand oo sheegay inuu gacan qaadi doono Terry iyo Cole kulanka:...
Rio Ferdinand oo sheegay inuu gacan qaadi doono Terry iyo Cole kulanka: Chelsea vs Man Utd.
Ciyaaryahanka la dhashay daafaca QPR Aston ee Rio Ferdinand ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu gacan qaado daafacyada kooxda Chelsea John Terry iyo Ashley Cole ka hor kulankooda Barclays Premier League. Sida uu qoray wargeyska The Sun.
Daafaca Manchester United Rio iyo daacafa QPR Anton ayaa dagaal qabow kala dhexeeyaa Terry iyo Cole.
Kulanka dhacaaya axada ayaa laga yaabaa inuu ku bilowdo Rio kaasoo wajahaya Cole xilli ay United Stamford Bridge kula ciyaareyso Chelsea. Waxaana dagaalkoodu circa isku shareeray ka dib markii u Terru hadalo cunsuri ah u adeegsaday Aston tiiyo uu Cole taageeray kabtanka Chelsea.
Terry ayaana ganaax kala kulmay FA-ga, halka Rio laftiisa lagu ganaaxay 45 kun oo ginni ka dib markii uu diiday inuu xirto maaliyado lagu muujinaayey sida loga soo horjeedo cunsuriyada ka dhex jirta kubada cagta.